Mee Mmemme Network na Cisco Devices | Ọzụzụ Ọzụzụ
Uzo esi emejuputa onodu Network na Cisco Devices
CISCO: Dika otutu netwọk data na data na-eleba anya, otua oke ibu ndi injinia ndi choro ime mgbanwe. Mkpakọrịta dị iche iche nwere ọtụtụ narị na ọbụna nnukwu ọnụọgụ netwọk. Iso onye ọ bụla na-emekọ ihe, n'otu oge, adịghị arụ ọrụ ma mee ka ọnụ ọgụgụ dị iche iche na-eme ka ọ ghara ịdị iche na ihe a ga-arụ na kọmputa.
Maka ndị weghaara ihe ọ bụla Cisco netwọk Ngwa na ihe gara aga na ogologo oge, ihe dị mma ịjụ bụ, "Ọ bụ igwe elekere (CLI), nke na-elekọta otu ngwaọrụ na oge ọ bụla, ụzọ kachasị dị irè nke a ga-enwe ike iji zoo nnukwu netwọk ọ bụla?"
Ọ na-esiri onye ọ bụla injinia ike ikwenye "ee" nke a.
Nhọrọ kachasị mma iji rụọ ọrụ ngwaọrụ nhazi ga-enweriri ike ịmegharị ihe mgbaru ọsọ netwọk. Cisco na-eme ma na-ewere ihe mgbe azụmahịa na-aga na Network Networkmability maka kọmputa.
Usoro nkwekọrịta Network Management (SNMP) n'ụzọ ziri ezi ejirila ọtụtụ ebe maka nlekota netwọk maka ogologo oge. A na-eche ya na mbụ na 1980s na SNMP enweghi mmemme zuru ezu nke netwọk.
Google, Dịka ọmụmaatụ, ekwuwo na ọ ga-enye SNMP maka nlekota maka ngwa netwọk ha n'afọ a.
Nkwekọrịta Network na Cisco nwere ike mejuputa atumatu na ntuziaka ụlọ ọrụ ndị a na mgbakọ n'efu:
Nkọwa okwu: N'okwu ziri ezi, Ngosipụta State Transfer (REST) ​​bụ ụkpụrụ maka mmemme weebụ weebụ iji jikọọ na saịtị. Cisco emepeela ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche na ọtụtụ mgbanwe na mgbanwe, yana ọzọ na Ngwa Centric Infrastructure (ACI) maka Ọrụ Network.
Eke Eke: Asụsụ a na-enye n'efu na-emepe emepe nke ọma na ọtụtụ ndị Linux maka otu ogologo oge. Cisco ugbu a na-achikota ederede ederede nke eke na nhazi NX-OS, ACI na usoro Cisco ndị ọzọ.
Ụdị data: Ihe ngosi data bụ ụzọ dị irè iji mara otú data si akọwa data ndị ọzọ na otu esi edozi data niile ma wepụ ya. Enwere ike ikwu ihe ka ukwuu n'ime ndokwa nke ọtụtụ ngwaọrụ netwọk na nnukwu ihe ngosi data. A pụrụ iji ụdị data rụọ ọrụ na Network Networkbility. Cisco emejuputala Management Tree Information (MIT) dị ka ngosipụta data n'ime ACI. Ihe ọzọ na-ebili na-egosi na enwere ike ijikọta na Cisco switches na switches bụ ngosi YANG. YANG bụ ihe ngosi data site na okwu ahụ bụ "Ọgbọ ọzọ na-esote," nke bụ ọkwa na-emeghe iji merie adịghị ike nke SNMP.
Oge ime mgbanwe na ngwaọrụ netwọk onye nke ọ bụla na-abịa na njedebe. Enwere ugbua ihe omuma ihe di iche iche na otutu ngwa Cisco ndi nwere ike ime. Ọ bụ ezie na ọ na-achọ ntinye ego ịkwado ego iji mepụta ihe ọ bụla netwọk netwọk, mgbe ya dum, nnukwu oge na mmefu ọrụ nwere ike chebe.